Iindaba malunga ne-Oukitel: iifowuni, uphononongo, ukukhutshwa kunye nokunye - i-Androidsis | I-Androidsis
Okwangoku sifumana inani elikhulu leemveliso zefowuni kwi-Android. Enye yeemveliso zamva nje esizibona ngakumbi nangakumbi kwimarike yi-Oukitel. Ligama eliqala ukuthandwa, nangona liyinkampani yakutshanje.
I-Oukitel yasekwa ngo-2007 kwisixeko sase Shenzhen e China. Esi sixeko sinokuchazwa njengenkunzi yezobuchwepheshe yelizwe, ikhaya kwiinkampani ezininzi kwicandelo. Kwakungekho ngo-2008 ukuba iifowuni zokuqala ze-brand zaqala ukubetha ezivenkileni. Ngo-2009 bahlangabezana nenxalenye yolwandiso lwabo lwamanye amazwe ngokuvulwa komzi-mveliso wabo omkhulu e-China ukusukela ngoko, i-Oukitel yenza indawo yentengiso ye-Android.
Ezona ntengiso zayo ziseAsia, kunye namazwe afana neTshayina okanye iKorea. Kodwa ixesha elide kuye kwalula ukuthenga iifowuni zabo eYurophu. I-Oukitel isungula iimodeli ngamaxabiso ancitshisiweyo kodwa eneenkcukacha ezilungileyo. Ihlala ijolise kwinqanaba eliphakathi kunye noluhlu lokufaka. Baye bathambekele ekubonakaleni kweebhetri zabo ezinkulu.
I-Oukitel WP17: i-smartphone erhabaxa enombono ebusuku
por UIgnacio Sala yenzayo Inyanga e-1 .
Ngaphezulu kweminyaka eli-13, kwi-Androidsis sixoxe kwaye sahlalutya inani elikhulu lezixhobo eziphathwayo ...
Ixesha le-5G lilapha, kodwa ngaba ikhona into ebhetele nangaphezu kokuba ne-5G kwiselfowuni yethu? Ewe, bala ...
I-WP15 yi-Oukitel's smartphone entsha ene-15.600 mAh ibhetri
Ibhetri ihlala yenye yeentloko eziphambili kubenzi abaninzi nakubasebenzisi….
Xa kuthengwa i-smartphone entsha, akufuneki ukuba sizisekele kwixabiso, nangona ihlala iphambili ...
I-OUKITEL C17 Pro inokuthengwa ngoku nge- $ 84,99
por UEder Ferreño yenzayo 2 iminyaka .
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sele sikuxelele ukuba i-OUKITEL C17 Pro izakwaziswa okwethutyana ngexabiso eliphambili. …
Kwiveki ephelileyo sidibene ne-OUKITEL C17 Pro ngokusemthethweni. Imodeli entsha yohlobo lwaseTshayina, ethi ...
Kukho izithuba ezininzi esizinikezele kwii-smartphones ze-OUKITEL. Inxalenye enkulu kuba ...
Kwezi veki zidlulileyo, sithethe izihlandlo ezininzi malunga nesiphelo sendlela ezayo esiya kuqaliswa yinkampani yase-Asia i-Oukitel kwintengiso, ...
I-OUKITEL Y4800, 48 Mpx kunye nokunye okuninzi
Ukubonelelwa kwee-smartphones kumbindi ophakathi kwe-Android kuyaqhubeka nokukhula ngokungalawulekiyo. Kwaye siyayibona indlela ehamba ngayo ngalo lonke ixesha ...
Le yindlela imifanekiso i-Oukitel Encinci Y4800 eya kusenza ukuba sibonakale ngathi
Sithethile malunga nokuqaliswa kwe-Oukitel elandelayo kwiiveki ezininzi. Sithetha ngeY4800 eNcinci, isiphelo sendlela esenzelwe yona ...
I-Oukitel iveza i-C15 Pro +, ingxelo ene-vitaminized ye-C15 Pro
Ihlabathi lomnxeba alikho kuphela kwiziphelo eziphezulu, nangona ziyimodeli uninzi lwazo ...
Uphengululo lweOUKITEL U18
Ukuphonononga i-Oukitel K3, i-Android enebhetri enkulu ye-6000 mAh